Safari Technology Preview 4 Azo alaina ho an'ny OS X | Avy amin'ny mac aho
Iray volana lasa izay dia namoaka ny Safari Technology Preview i Apple, mpizaha tranonkala iray ho an'ireo mpamorona tranonkala misy endri-panandramana. Amin'ny fikasana hanohy hanintona ny fahalianan'ny mpamorona, Apple dia nandefa ity fampiharana vaovao ho an'ny Mac ity. Noho io mpitety tranonkala io dia afaka manandrana teknolojia fandaharana vaovao izay eo an-tsena izao ireo mpamorona tranonkala na ho tonga eny an-tsena, satria ny fikasana Safari dia ny an'ny havaozy ity browser ity isaky ny tapa-bolana. Raha nametraka an'ity rindranasa ity ianao dia ho hitanao fa mitovy amin'ny an'ny Safari ny sary famantarana ny fampiharana ary tsy misy afa-tsy ny lokon'ny lokon'ny sary dia ny volomparasy.
Safari Technology Preview dia mamela antsika hanana ny vaovao farany amin'ny HTML sy CSS, ankoatry ny fahazoana fanavaozana tsy tapaka, afaka mampiasa fitaovana ho an'ny mpamorona ary koa mandray anjara amin'ny fampandrosoana ity kinova ity amin'ny fanomezana valiny toy ny mpampiasa mitsapa ny betsa samihafa fa ny orinasa dia manomboka amin'ny tsenan'ny iOS, OS X, watchOS ary tvOS.
Ny orinasan-tserasera Cupertino dia nanangana ny kinova fahaefatra amin'ity browser ity tamin'ny beta, ary araka ny hitantsika amin'ny fanovana ny kinova vaovao, nohatsaraina ny fiasa anatiny hanatsarana ny serivisy ho an'ny mpamorona. Na eo aza ny fiomanana amin'ny mpamorona tranonkala, azonao atao ny misintona sy mametraka azy amin'ny Mac.
Raha liana amin'ny fisintomana ny Safari Technology Preview ianao dia mila mandalo fotsiny ilay Apple Developer Center ary ampidino izany. Tsy toy ny beta hafa, izay raha ilaina ny manana kaonty voasoratra anarana, amin'ity indray mitoraka ity, Tsy mitaky fisoratana anarana ny mpampiasa ato amin'ity programa ity. Mazava ho azy, ny fanavaozana an'ity fanandramana fanandramana ity dia hita ao amin'ny Mac App Store.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple products » Safari Technology Preview 4 Azo alaina ho an'ny OS X ankehitriny
Apple hanokatra Apple Store vaovao any Los Angeles